Kalluunka Swordfish: astaamaha, deegaanka, cuntada iyo inbadan! | Kalluunka
Carlos Garrido | | Kalluunka
Waxaa laga yaabaa, markaad tixraacayso adduunka biyaha ku jira, kalluunka had iyo jeer maskaxda ku soo dhaca. Hagaag, kuwani waa xayawaanka ugu caansan ee noocan ah deegaanka, waana kuwo si sax ah u sabab ah qaababkooda kala duwan, midabada, dabeecadaha, iwm. Shaki kuma jiro in kooxdan makhluuqaadka ah aan ku tilmaami karno kuwa badan, laakiin laga yaabo inuu yahay mid ka mid ah kalluunka ugu badan ee aadka u xiisaha badan.
Kalluunka Swordfish wuxuu ku sugnaa nolosha aadanaha sababo badan awgood, maaddaama oo ay aad noo xiisaysey tan iyo weligeed. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa in badan oo idinka mid ah oo aan wax weyn ka aqoon isaga, waana sababta aan u sameynay maqaalkan. Halkan, adiga waxaan bixin doonaa macluumaad ballaaran kaas oo aad aad ugu baran karto kalluunka seefta badan ee cajiibka ah.
1 Deegaanka Swordfish
2 Astaamaha ugu waaweyn ee loo yaqaan 'swordfish'
3 Swordfish cuntada
Waxaa jira xaalado marka si gaar ah xayawaanku u yahay, ka sii dhib badan yahay. Uma wareejin karno sharcigan kalluunka seefta.
Kalluunka seefta waxay ku dhaqmaan ficil ahaan dhammaan badaha adduunka. Dabcan, maahan dhammaan meelaha lagu maydho biyaha badda inay jecel yihiin. Waxay leeyihiin doorbid xoog leh biyaha nooca diiran, sida kulaylaha iyo kuleylka. Guud ahaan, waxay u guuraan aagagga ku dhow dusha sare, kuwaas oo heerkulkoodu wareegaayo hareeraha 15 ºC. Dhinaca kale, waa run oo kaliya kuma koobna dhulalkan oo keliya, laakiin sidoo kale waxaa jiray munaasabado, iyo in ka badan hal, oo lagu arkay iyaga oo ku jira biyo qabow, in kasta oo aan ku adkaysannay in aanu ahayn tan ugu badan .
Haddii aan dooneyno inaan sii faahfaahinno oo aan magacawno meelaha ugu caansan ee loo yaqaan 'Seefish', liistada soo socota ayaa soo bixi doonta: waqooyiga Peru, waqooyiga Hawaii, bariga Japan, iyo qaybo ka mid ah Mexico iyo Mareykanka.
Astaamaha ugu waaweyn ee loo yaqaan 'swordfish'
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii maqaalkan, kalluunka loo yaqaan 'swordfish', oo magiciisa cilmigu yahay Xiphias gladius, Waa mid ka mid ah kalluunka ugu layaabka badan ebid. Sirta xaaladani waxay ku jirtaa naanaysta.
Afka dheer ee fiiqan ee kalluunkani waa astaantiisa aqoonsiga aan la qarin karin. Qaab dhismeedka lafahani wuxuu si aad ah ugu eg yahay galka seefta dheer, oo ay u adeegsato inay ku weeraraan ugaadhsigeeda ugana difaacdo ugaarsadayaasha suurtagalka ah.
Afkaas gurguurta ka baxsan, kalluunka seefleyda ayaa leh jidh aad u weyn. Iyo, haa, markaan dhahno weyno, wey weyntahay. Tijaabooyin ayaa la helay oo gaadhay ilaa 5 mitir oo dherer ah oo culeyskiisu ka badan yahay nus tan, ku dhowaad waxba! Jidhkani wuxuu badanaa leeyahay codad mugdi ah, oo midabada ay ka mid yihiin madow iyo buluug yihiin. Waa in la ogaadaa in marka ay timaado isku dhafka jirka, dheddigga ay aad uga badan yihiin ragga.
Sifada kale ee loo yaqaan 'swordfish' waa in ay xayawaan tahay kulkulul, taasi waa, awood u leh inay ilaaliso heerkulka jirkaaga oo ka sarreysa tan biyaha ay ku jirto.
Ugu dambeyntii, sheeg in ay yihiin kalluun leh a aragti weyn iyo sida caadiga ah, cidlo ah.
Haysashada hub u awood badan sida afkiisa fiiqan oo fiiqan, ayaa tilmaamaya taas caadooyinka seef-badeedku waa kuwa hilib cun ah. Hadaad taas u malaynaysid waad saxantahay.
Waxay ka mid yihiin kalluunka leh xirfadaha ugaarsiga adduunka ugu fiican. Waxaa intaa dheer, mar dambe kuma xirna oo kaliya hubkaas oo ahmiyad weyn aan saareyno, laakiin taasi xawaaraha iyo dhaqaaqa dhaqdhaqaaqeeda waxay ku siisaa xoog ugaar ugaarsi aad u weyn.
Noocyada kala duwan ee noocyada ah ee aan u kala saari karno inay yihiin ugaarsiga kalluunka loo yaqaan 'swordfish' waxaa ka mid ah kalluun kale sida mackerel, hake, tuna, iwm. Iyaga waxaan sidoo kale ku dari karnaa xoogaa qolof ah, cephalopods, iwm.
Kalluunka Swordfish waa xayawaan jilicsan, oo loo tarjumay ukun ka dillaac. Nidaamka bacriminta waxay ku dhacdaa iyada oo loo marayo habka bacriminta dibadda (Dheddigga ukunta waxay ku sii daayaan biyaha, taas oo hadhow bacrimin doonta shahwada ragga), waxaana xusid mudan in ragga ay gaaraan biseyl ka hor kan dheddigga.
Beedka ugxantu waxay dhacdaa sanadka oo dhanSidaa darteed, kalluunka seefdu ma haystaan ​​waqti cayiman oo ay ku soo saaraan, illaa iyo inta biyuhu leeyihiin heer-kul diiran oo diiran. Meelaha la doortay badiyaa waa Badweynta Caribbean, Xeebaha Florida iyo Gacanka Mexico.
Xaqiiqda kale, oo ka sii xiiso badan, ayaa ah in dheddiggu ay awood u leeyihiin inay keydsadaan wax badan oo aan ka yareyn 1 illaa 29 milyan oo ukumo. Waa run in xajmiga kalluunkan, ukunta ay aad u yar tahay, oo aan ka weynayn tan Dhexroor 2 milimitir.
Waxaan rajeyneynaa inaan ku soo bandhignay wax yar oo ku saabsan kalluunka loo yaqaan 'swordfish', oo nasiib darro hoos u dhac ku yimid qayb weyn oo ka mid ah awgeed kalluumeysi aan kala sooc lahaynMaaddaama ay tahay mid ka mid ah noocyada, waxay ku leedahay joogitaan weyn nafaqada aadanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Kalluunka » Swordfish
Aad baad u mahadsantahay! Waan jeclaa!
Heerkul ku habboon kalluunka kulaylaha